हिजो सामाजिक आज दैहिक विकारहरुसँग टक्कर लिँदै अखिल [जीवनी] – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
हिजो सामाजिक आज दैहिक विकारहरुसँग टक्कर लिँदै अखिल [जीवनी]
२०७७ आश्विन २४, शनिबार १०:०१ गते
तनहुँमा रामनाथ शर्मा भट्टराई दुुई जना भेटिएर, त्योभन्दा बढी पनि हुुनसक्थे सक्न त, झमेला भएकोेले रामनाथजीले आफ्नो नामको अघिल्तिर ‘अखिल’ जोड्न थालेका हुुन् । यसो गर्दा यो ‘उग्र’ कम्युुनिस्ट हो भनेर पञ्चप्रशासकहरुले राजकाज मुुद्दा लगाएर फसाउन निकै दुुस्साहस गरे । उनले यो आरोपसँग जुुद्धा दुुःख त खुब पाए, तर कहीँ पनि झुुकेनन् र हार खाएनन् । उनका शैक्षिक र अन्य सबै प्रमाणपत्रहरुमा यही नाम लेखिएको छ । यो लेखकलाई पनि रामनाथजीलाई परेको जस्तो झमेला परेको थियो, आफ्नो ‘निर्जीव’ टाइटलले गर्दा । यी दुुवै साथी निवृत्त भैसकेकाले अब उनीहरुलाई प्रमाणपत्रहरुको काम नआउने भएकाले झोझमुुक्त भएका छन् ।
रामनाथ शर्मा अखिलका जन्ममितिका अङ्कहरु अनौठा छन्– २००२–०२–०२ । उनी बन्दीपुुर, तनहुँमा जन्मिए पनि बीचमा बरादीमा बसे र आजभोलि भरतपुुर चितवनमा ।
उनले रत्नराज्य कन्या निमाविमा शिक्षण कार्य प्रारम्भ गर्दै तपसिलका विद्यालयहरुमा समेत अध्यापन गरे– भानुु मावि बन्दीपुुर, मीन मावि थर्पूू, महेन्द्र ज्योति मावि सिसाघाट, हिमाञ्चल आमावि पोखरा, निर्मल मावि दमौली, शान्तिवर्ष आमावि दमौली, मित्रता मावि सत्रसय ।
उनी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन तनहुँका अध्यक्ष र केन्द्रीय प्रतिनिधि भएका थिए । शिक्षकहरुका हक, हित र सुुविधाका लागि सञ्चालित स्थानीय र राष्ट्रिय आन्दोलनहरुमा उनी सहभागी भएका थिए ।
कम्युुनिस्ट पृष्ठभूूमि र बहुुदलीय झुुकाव भएकै कारणले उनी २०३८ सालमा शिक्षक पदबाट निष्कासित भए । २०५२ मा सर्वोच्च अदालतमा पुुनरावेदन गरी वर्ष जोडेका थिए । यो मुुद्दामा अखिलसित यो लेखक निर्जीव पनि आफ्नो समान खालको मुुद्दा लिई जोडिएको थियो ।
२०२४ मा पुुष्पलाल श्रेष्ठको नेकपामा सदस्यता लिएका रामनाथ आजपर्यन्त अविचलित यसै पार्टीमा अर्थात् नेकपा केन्द्रमै आबद्ध रही आएका छन् । उनी २०४८ को दोस्रो संसदीय निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नं ४ बाट उमेदवार भएका थिए, जनमोर्चाबाट । उनी त्यहीँबाटै समानुुपातिक उमेदवार भएका थिए पनि, तर कमजोर चुुनावी तयारीका कारणले विजय प्राप्त हुुन सकेन ।
उनी अत्यन्त सचेष्ट र सक्रिय शिक्षक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले राजनीतिक÷सामाजिक परिवर्तनका गतिविधिहरुमा सदा अगाडि रहे । उनी बन्दीपुुरबाट दमौलीमा सदरमुुकाम सार्ने घटना (२०४७) मा सार्न नदिने बन्दीपुरवासीका तर्फबाट सङ्घर्षमा अग्रपङ्क्तिमा उभिए । त्यो घटनामा सदरमुुकाम सार्ने पक्षको निर्मल रानाभाटको ज्यानसमेत गएको थियो ।
इतिहासका विभिन्न कालखण्ड पञ्चप्रशासकको दमनको बखत होस् वा बहुदल र गणतन्त्रका असङ्गतिका बखत होस्, रामनाथजी तिनका विरूद्ध निर्भीकतापूूर्वक जुुधिरहे । शैक्षिक आन्दोलनहरुमा त उनी सधैँ अग्रभागमा उभिइरहे ।
एउटा स्वाभिमानी र सङ्घर्षशील व्यक्तिमा हुुनुुपर्ने त्याग, निस्वार्थता, निर्भीकता आदि यावत् विशेषताहरु उनमा विद्यमान थिए र छन् पनि ।
उनी कवि र लेखक पनि हुन्, यद्यपि उनका फुुटकरबाहेक सिङ्गा कृतिहरु प्रकाशित छैनन् ।
मधुुमेह, रक्तचाप, मिर्गौला, छाती आदि रोग भएका रामनाथजी २०७५ मा सिकिस्त्त बिमारी भए । आफ्ना पार्टीका नामी नेताहरुको माध्यमबाट स्वास्थ्योपचारका लागि उनले २÷२ पल्टसम्म आवश्यक डकुुमेन्ट्ससहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन गरे, तर कुुनै सहयोग प्राप्त भएन र ‘माध्यम’समेत निष्क्रिय र उदासीन बन्दै गयो । आज उनी भरतपुुर विकासचोकमा पत्नी शशि शोभाको साथ र सेवामा घर कम्पाउन्डभित्रै अशक्त र स्थिर जीवनयापन गरिरहेका छन्, नाना रोगहरुसँग सङ्घर्ष गर्दै ।
उनी भन्छन्– ‘समाज परिवर्तनका निम्ति काम गर्ने समय र उमेर हुँदै रोगहरुले थिचेकोले अब यिनका विरूद्व पो सङ्घर्ष गरेर बस्नुपर्ने भयो । समाज परिवर्तनका निम्ति उहिलेझैँ सङ्घर्ष गर्ने मौका गएजस्तो छ ।’
आफ्ना नेता साथीहरुद्वारा सहयोग हुने कुरामा के आशा मारिसके को हो र ? भनी प्रश्न गर्दा उनले दुर्बल र क्षीण स्वास्थ्य देखाएर भने– ‘हो, तर तपाईंहरु जस्ता हितचिन्तक साथीहरु बोल्नुभो, बाझ्नुभो, दौडनुभो भने मृत आशा बौरन सक्छ, तर यी दिन मेरा लागि को तयार होला र ?’
मैले अखिलजीलाई पहिले पहिले त साहित्यिक पत्रिकहरुमा कविता र निबन्धहरु प्रकाशित हुन्थे, तिनलाई किन पुस्तकमा रुपान्तरण गर्नुभएन त नि ? भनेर सोध्दा उनले समर्थन जनाउँदै ‘अन्वेषणमूलक लेखहरुलाई परिमार्जन गर्दैछु तर हातले लेख्न सक्तैन, टाइप गराउन त्यहाँसम्म पुग्न सक्तिन’ भनी सुनाए ।
उनले यसो भनेपछि छोरीहरु एकाएक पठित र ज्ञानी भएकाले उनका कृतिहरु प्रकाशित हुने कुुरामा म ढुक्क छुु ।
उनको यस्तो शारीरिक कमजोरी र वेदनामय अभिव्यक्ति सुनेपछि हामी दुई आफ्ना सेवालाई पुनर्बहाली र वर्ष गणना गराउन कहिले सर्वोच्च अदालत, कहिले चम्पानगर र कहिले बरादी कुदेको पुराना स्मृतिहरुका पानाहरु पल्टिए । म धेरै भावुकमात्रै भइनँ, उनीप्रति सहानुभूतिशीलसमेत भएँ । भएरमात्रै के गर्नु ? आखिर उनका निम्ति म पनि के सहयोग गर्न सक्थेँ र ! यसरी बेलाबखत भेट्न आउनुबाहेक ।
आखिर अखिलजीका लागि उल्लेख्य सहयोग गर्न नसक्ने भए पनि कम्तीमा २÷४ महिना बिराएर भेट्न आउन त सकेकै छु भनेर चित्त शान्त गर्दै म उनको घरबाट ओझेल परेँ ।